Seza fialamboly mahazatrampanamboatra sy mpamatsy | James Bond Furniture
an-trano > Fanaka mahazatra an-tsokosoko > Seza fialamboly mahazatra
Ny seza fialan-tsasatra mahazatra dia iray amin'ireo olan'ny James Bond furnitre. Mino mafy isika amin'ny foto-kevitry ny 'mpanjifa aloha, laza aloha' ary mandray am-pahatsorana ny mpanjifa tsirairay avy. Miezaka manatratra ny fitakian'izy ireo izahay ary mamaha ny fisalasalany. Ireo vokatra dia manana kalitao tsara sy mitombina. Manantena fatratra ny lahateninao sy ny raharaham-barotra ataonao izahay!
James Bond Classic fialamboly seza hazo hazo volafotsy F065
Fialam-boly ho an'ny fialam-boly mahazatra, James Bond vokatra haingo ho an'ny voninahitra. Ny fanaka mahazatra mahazatra dia misy fitaovana tsara, asa tsara, asa fivarotana aorian'izay sy ny sisa. Izahay dia mametraka ny fahafaham-po ho an'ny mpanjifa hatrany amin'ny voalohany, satria ny fahafaham-po ny mpanjifa, no ekena lehibe indrindra amin'ny fanaka mahazatra anay James Bond!
James Bond seza fialamboly ho an'ny fialam-boly kanto JP613
seza seza fisakafoanana an'ny James Bond, mampiasa lamba ampidirina, malefaka, malefaka. Rehefa mipetraka eo ny olona dia mahatsapa fa tsy te-hijoro izy ireo. Misy lamina tsara tarehy, tena mahazo aina ny olona, ​​misy ny fahatsapana fialan-tsasatra! Tianao ve ilay izy? Aza misalasala mifandray aminay.
James Bond fanaka volamena 14k seza seza volamena 14k A609 (Light brown）
James Bond fanaka mahazatra, toe-tsaina nanolo-tena, serivisy kalitao, hanehoana ny mpanjifa. Tianay ho gaga ny mpanjifanay rehefa mahazo ny fanaka mahazatra anay ary ho tian'izy ireo. Izany rehetra izany dia miankina amin'ny taona niainan'i James Bond, ary koa ny ezaka sy famoronana mpanao asa tanana maromaro izay manana traikefa mihoatra ny 10 taona.
Seza seza fisakafoanana any Chine Klasika - mpanamboatra miloko mena sy manga-
Seza seza fitsangatsanganana an-trano any Shina mahazatra - famenon'ny mpanamboatra mena sy manga-. Seza seza fisakafoanana mahazatra - saribao mena sy manga dia vokatra avo sy kalitao tsara. Foshan James Bond Furniture Co., Ltd dia manana serivisy serivisy serivisy tsara ao amin'ny tsen'izao tontolo izao. Seza seza fandraisam-bahiny mahazatra - famenahana mena sy manga Ny lazan'ny tombony dia azo avy amin'ny antoka omena azy.
James Bond seza fanaka fialamboly mahazatra （Light volo & champagne） A970
James Bond fanaka mahazatra, seza fialam-boly dia afaka mamela ny olona iray hahatsiaro fialamboly, avelao ny olona iray haka aina. Ny asa tsara nataony, sary sokitra telo santimetatra, toy ny asa tanana iray. Ny fanaka mahazatra Classic dia manana tantara an-jatony taona, sanda sy haingo ara-tantara tena fanta-daza, izay tena malaza amin'ny olona. Manantena ny olon-drehetra fa afaka manana ny fanaka mahazatra tena mitovy amin'ny tena ihany koa.
Seza seza fisakafoana mampientam-po amin'ny Professional - avy amin'ny mpanamboatra James Bond Glory
James Bond seza fialam-boly mahazatra dia manamboatra endrika matevina. Izy io dia matanjaka ary mateza. Ity seza fialamboly mahazatra amin'ny fialamboly ity dia vita amin'ny lamba avy any Belzika, miaraka amina endrika tsara tarehy, modely liona, maneho ny hery, ny hery sns sns manantena aho fa tianao io.
James Bond Classic fialamboly seza 14k volamena sy hazo matevina mavana volamena seza A213
James Bond seza fialam-boly mahazatra, mitondra olona karazana rivo-piainana fialamboly, mitondra olona milamina, mitondra fahatsapana faly! Tsy vitan'ny hoe tsara tarehy, fa tena sarobidy. Izy no namanay tsara, hiaraka aminay handany fotoana fialan-tsasatra, andao haka-tsasatra kely.
Fandraisana amin'ny fialan-tsasatra mahazatra Classic Red sy Blue James Bond fanaka mahazatra
Seza fotsy volamena 14k sy manga mahazatra manga dia James Bond mahazatra fanaka lehibe entana. Azafady mba mifandraisa amin'i James Bond hahalala kokoa ny mahazatra Ny antsipirian'ny seza fialam-boly. + https: //jamesbond-furniture.com